DIIWAANKA Boeing 757-200 Donald Trump FSX & P3D - Rikoooo
Updated on 02 / 06 / 2020: Moodeel cusub oo ah 757-200 oo uu abuuray TDS (kaas oo badalaya 757 POSKY), oo lagu daray daraasiin jimicsiyo ah iyo adeegyo dhul, nidaam nal cusub, qaab dhismeedka cusub ee TRUMP ee HD oo uu abuuray Rikoooo. Hada la jaan qaada Prepar3D v4 iyo v5. Diyaaraddaan waa in lagu qaadaa nooca 2D Panel xitaa haddii ay jirto aasaasi ah VC. Diyaar u ah GSX.
Ma ogtahay in bilyaneerka Donald Trump uu leeyahay diyaarad qaas u gaar ah? Waxay u diyaarsatay Boeing 757-200 gudaha gudaha oo qaali ah.
Waxaa hadda suurtogal ah in la wareego dayuuradahan duulimaadka duulimaadkaaga mahad leh Rikoooo, diyaaradda waxaa ku jira guddi aad u faahfaahsan oo 2D ah (shaashad ballaaran), aasaasiga ah ee VC, FMC, GPWS, Adeegyada dhulka, Auto-land (auto-land ayaa dhulkaaga soo geli doona. diyaaradda lafteeda oo ay weheliso ILS, arag dukumiinti), dhawaaqyo gaar ah u leh Rolls-Royce, animations dhammaystiran, liifka TRUMP si adag ayuu ula mid yahay asalka oo uu abuuray Rikoooo.
Diyaaradda nooca loo yaqaan 'Virtebit' waa mid aad u aasaasi ah, sababtaas awgeed waa in diyaaraddaan gebi ahaanba looga soo duuli karaa 2da sare ee 'XNUMXD Panel' oo laga sameeyay XML oo uu dhisay G Munro.
Gudaha Boeing 757-200 fiidiyowga
Qoraa: 757-200 moodal TDS, TRUMP dib u hagaajin ay sameysay Erik BENDER (Rikoooo.com), 2D gudi gudi G Munro, 757 dhawaaqa maqalka Adam Murphy